Q4OS 4.0 Gemini vonona ny hizaha toetra ary Q4OS 3.10 Centaurus efa miorina amin'ny Raspberry Pi | Avy amin'ny Linux
Nandritra ity tapa-bolana farany tamin'ny volana feb. namoaka vaovao roa ireo mpamorona izay miandraikitra ny Q4OS tena zava-dehibe, lNy voalohany amin'ireo dia ny famoahana ny kinova fampandrosoana Q4OS 4.0 izay hanana ny kaody "Gemini" ary ny vaovao hafa zara raha nampahafantarina izany dia ny fanamafisana ny fananganana kinova Q4OS 3.10 Centaurus ho an'ny Raspberry Pi.
Ho an'ireo izay tsy mahalala momba ny Q4OS dia tokony ho fantatr'izy ireo izany dia fizarana Linux Anarana mifototra amin'ny loharanom-baovao Debian miaraka amina rindrambaiko maivana sy sariaka amin'ny mpampiasa vao, manolotra tontolon'ny birao antsoina hoe Trinity, fantatra koa amin'ny hoe TDE Trinity Desktop Environment, mitovy amin'ny Windows XP sy Windows 7 mivantana. Izy io dia mifantoka amin'ny fitoniana maharitra, fiarovana, hafainganana ary fahatokisana.
1 Momba ny Q4OS
2 Momba ny kinova Q4OS 4.0 Gemini vaovao
3 Q4OS 3.10 Centaurus dia miorina amin'ny Raspberry Pi
Momba ny Q4OS
Ity fizarana Linux ity, miaraka amin'ireo hafa toa an'i Chalet OS3 sy Zorin OS, manana fomba fiasa mifantoka manokana amin'ireo mpampiasa zatra Windows, miaraka amin'ny fisehoana namboarina teo aloha mba hitoviana amin'ilay an'ny Microsoft Operating System.
Tahaka ny ataon'ny Linux Lite, Q4OS dia mamela anao hampiasa indray ireo solosaina taloha ireo, nilaozan'ny toerana hafa noho ny fetran'ny fampiasa amin'ny fitaovana, izay niasan'ny Windows XP teo aloha, izany hoe solosaina ambany loharano, izay tsy mandeha intsony ny kinova maoderina indrindra an'ny Windows.
Noho io filàna io dia teraka ny Q4OS, na dia efa noforonina ela be talohan'ny nanambaran'i Microsoft ny fiafaran'ny fanohanana ny Windows XP.
Camin'ny iraka hanaterana rafitra miasa haingana sy mahery mifototra amin'ny teknolojia farany eo am-panolorana tontolon'ny birao mahomby.
Momba ny kinova Q4OS 4.0 Gemini vaovao
Ity sampana fampandrosoana vaovao an'ny Q4OS 4.0 miaraka amin'ny anarana kaody "Gemini" dia tonga miorina amin'ny sampana fampandrosoana an'ny Debian izay Debian "Bullseye" ary milaza izany ireo mpamorona Q4OS ny asa dia hatao amin'ny fampandrosoana Q4OS 4.0 mandra-piorenan'ny Debian "Bullseye", ka ity kinova ity dia homarihina ho "kinova fampandrosoana" farafahakeliny iray na roa taona.
Amin'ireo fiasa voalaza an'ny sampana vaovao dia hoe hanana fanohanana dimy taona izy hatramin'ny daty namoahana azy ary, tsy toy ny fampitam-baovao teo aloha, Q4OS 4.0 Gemini dia hampiditra fonosana rindrambaiko birao fenoo.
Na dia afaka mangataka amin'ilay fitaovana firaketana amin'ny birao aza ny mpampiasa hamafa ny rafitra kendrena amin'ny iray amin'ireo antsoina hoe 'Profiles Software' efa voafaritra nandritra ny fizotry ny fametrahana azy manontolo.
Araka izany dia nanonona izy ireo fa ity kinova vaovao ity dia ho avy miaraka amin'ny fitaovany manokana sy ny fiasa manokana, toa ilay efa voalaza 'Desktop profiler' amin'ny famoahana profil amin'ny asa asa matihanina isan-karazany, 'Fitaovana fananganana' ho an'ny fametrahana tsy misy olana amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo, ankoatry ny zavatra hafa.
Ho an'ireo izay liana amin'ny fitsapana ity kinova fampandrosoana ity dia afaka mahazo ny sarin'ny rafitra izy ireo avy amin'ny rohy etsy ambany.
Q4OS 3.10 Centaurus dia miorina amin'ny Raspberry Pi
Etsy ankilany, iray hafa amin'ny fanambarana Q4OS amin'ity volana ity dia ny asa vitan'i ny mpamorona azy manatsara ny fahasarotana avy amin'ny Q4OS kinova 3.10 novokarina ho an'ny Raspberry Pi. Ankoatr'izay Voalaza fa ny asa koa dia natao hanangonana ny kinova farany amin'ity tabilao ity, izay ny Raspberry 4.
Ao amin'ny fanambarana dia mizara ireto manaraka ireto ny mpamorona:
Faly izahay manambara ny famoahana vaovao marim-pototra vaovao amin'ny seranan-tsambo Q4OS 3.10 Centaurus ARM, nohamarinina ho an'ny andiany Raspberry Pi, ao anatin'izany ny fitaovana Raspberry Pi 4 vaovao.
Ao amin'ny doka dia lazainy fa ny dikantenin'i Q4OS ho an'ny Desktop RPi dia miorina amin'ny kinova farany navoakan'ny Raspbian Buster ary ny kinova farany milamina an'ny Trinity Desktop R14.0.7Ho fanampin'izany, mirehareha izy ireo fa ny rafitr'izy ireo dia iray amin'ireo fizarana Linux manome ny tontolo birao feno amin'ny maritrano ARM.
Raha ny fisintomana an'ity sary ity dia azonao atao avy amin'ny rohy etsy ambany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Q4OS 4.0 Gemini izao dia vonona ny hizaha toetra ary Q4OS 3.10 Centaurus efa miorina amin'ny Raspberry Pi
Ho anao izay tsy mahalala, TDE dia fork an'ny KDE 3 namboarin'ny olona tsy tia ny làlan'ny KDE 4.
Tsy toa ny Windows XP na 7 izany fa ireo olona ireo no manamboatra azy ho toy izany, eritreretiko ny hisarihana ireo mpampiasa Windows.
Ity distro ity dia misy birao roa azo isafidianana, miaraka amin'ny TDE na amin'ny Plasma. Samy nanandrana aho ary mety tsara amin'ny solosaim-birao roa.
Izaho manokana dia afaka nanamarina fa mandeha tsara ary miaraka amin'ny faniriana ny taloha dia miditra aminao, na dia milamina sy haingana be aza io distro io.
Tsy haiko, toy ny fanandratana an'i Mate ho mpisolo toerana ny Gnome 2, tsy fantatro koa ny antony saika tsy misy hampiroborobo ny TDE ho solon'ny KDE 3 ho an'ireo olona rehetra maniry an'io birao io. Izaho manokana dia tiako foana ny KDE 3, na dia efa zatra Plasma aza aho izao, tsy midika izany fa tena tsara io birao io.
Initiative momba ny fotodrafitrasa fototra: Ny làlana mankany amin'ny fanamafisana ny loharano misokatra